Bilaogin-dahatsary Iraisampirenena: Fiaraha-miasa Miampita Sisintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2017 11:38 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Português, 繁體中文, 简体中文, Español, Deutsch, English
(Marihina fa tamin'ny 14 Aprily 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ny Vlog International Bilaogin-dahatsary Iraisampirenena dia tetikasa mampivondrona ireo bilaogeran-dahatsary miteny Espaniola : mandefa ny heviny ny olona ary rehefa voafidy ny iray amin'izany dia mandrakitra ny sombindahatsariny ny tsirairay , misy olona manao fanitsiana avy eo ary mamoaka izany ao amin'ny tranonkalan'izy ireo . Nanomboka tamin'ny taona 2006 ny tetikasa, rehefa nisy vondrona mpinamana maromaro nivory mba hanao lahatsary ho fanomezam-boninahitra ho an'ilay namana bilaogeran-dahatsary [es ]: tamin'ny alalan'ny tranonkalany no nihaonan'ny tsirairay, ary te hankasitraka izany ampahibemaso izy ireo. Nanaraka ho azy avy eo ny tetikasa manaraka : nandia zava-tsarotra teo amin'ny fiainany ilay namana izay nikarakara ny lahatsary fiaraha-miasa voalohany, ary nanapa-kevitra ny tsirairay mba haka lahatsary firariantsoa ho an'ny tsingerin-taona nahaterahany : nalain'izy ireo ny lahatsarin'izy ireo mihira fiarahabana , sady mitendry ny feonkira amin'ny zavamaneno no mandihy sy mipetraka eo anoloan'ny mofomamy misy labozia, ary azo jerena amin'ny alàlan'ny fanarahana ity rohy ity [es] izany lahatsary izany.
Nanomboka niantso izany zavatra niainany izany hoe “Sancocho de Video” izy ireo: ny hoe sancocho dia anarana nomena ny lasopy maro samihafa manerana an'i Amerika Latina. Momba ny fandehanana manodidina ny bolongana ny lahatsary farany avy amin'ny vondrona Bilaogeran-dahatsary Iraisam-pirenena . Nizara ny tontolo manodidina azy ny Bilaogeran-dahatsary avy any Kolombia, Israely, Canada, Alemaina sy Etazonia. Azonao jerena amin'ny alalan'ny kitika eto na amin'ny fanindriana ny fandefasana ity lahatsary manaraka ity izany.
Efa manana lahatsary fiaraha-miasa miisa 31 mahery ny Bilaogin-dahatsary Iraisampirenena ao amin'ny pejy blip.tv ary manantena hatrany hanampy bilaogeran-dahatsary maro kokoa izy ireo ao amin'ny tranonkalany. Ireo olona liana amin'ny fanaovana lahatsary maharitra 1 minitra no zavatra ilaina : manazava ny toerana misy azy ireo sy ny momba azy ireo ny 30 segondra voalohany, ary maka sary ny “tanjon'ny ” lahatsary manaraka ny 30 segondra faharoa , ary avy eo misintona ny lahatsary sy mandefa izany amin'ny mailaka. Azonao jerena ato ny toromarika amin'ny teny espaniola.
Navoaka teo ambanin'ny lisansa Creative Commons ireo lahatsary rehetra ireo, ary azonao atao ny mandray anjara amin'ny dingana amin'ny alalan'ny famakiana ny wiki . Ny fitetezana amin'ny alalan'ny fizarana samihafa no fomba lehibe ahitana ny fomba fijery mikasika ny olana amin'ny ankapobeny. Ao amin'ity lahatsary manaraka ity [es], mitondra antsika ny fitsidihana lavitra ny toeram-pivarotana lehibe mankany amin'ny tsena nentim-paharazana samihafa any Frantsa, Angletera, Italia, Alemaina, Meksika, Brezila, Etazonia, Chile, Espaina ary Kolombia ny Bilaogeran-dahatsary.